“Juventus way naga xoogan tahay, balse waan la dagaalami doonaa” – Gennaro Gattuso – Gool FM
Frank Lampard oo shaaca ka qaaday farqiga u dhaxeeya Christian Pulisic iyo Eden Hazard
Massimiliano Allegri oo saadaaliyay mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus
RASMI: Nemanja Matic oo heshiis cusub u saxiixay Kooxdiisa Manchester United
“Lionel Messi waxa uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doonaa Barcelona” – Madaxweyne Bartomeu
Barcelona oo doonaysa inay lacag kaash ah ku iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Ivan Rakitic
Kooxda Manchester United oo bedelka Jadon Sancho ka dhex aragta horyaalka Premier League
Lionel Messi oo ka sameeyay rikoodh cajiib ah kulankii xalay ay guusha ka gaareen kooxda Villarreal
Dani Alves oo weerar ku qaaday garsoorka Spain kaddib guushii ay Real Madrid ka gaartay Athletic Bilbao
Massimiliano Allegri oo shaaca ka qaaday awooda Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid
Barcelona oo guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Villarreal… +SAWIRRO
“Juventus way naga xoogan tahay, balse waan la dagaalami doonaa” – Gennaro Gattuso
Dajiye November 10, 2018
(Milan) 10 Nof 2018. Tababaraha kooxda AC Milan Gennaro Gattuso ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id ka hor kulanka xiisaha badan ee Juventus ay ku wada ciyaari doonaan mid ka mid ah kulamada 12-aad ee horyalka Serie A.
Kooxda AC Milan ayaa habeen dambe ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda San Siro hogaamiyaasha horyalka Serie A ee Jeventus, kahor kulankan ayuu tababare Gennaro Gattuso ka hadlay dhowr arimood wuxuuna yiri.
“Juventus waxay heysataa koobab fara badan, waxay ku xoogan tahay meel kasta, sidoo kale wuxuu ku fiican tahay wax walba, waa kooxda ugu fiican yurub, waxay kala siman tahay Barcelona”.
“Imaatinka Cristiano Ronaldo waxay noqdeen kuwo maskax ahaan iyo khibrad ahaanba heersare ah, iyadoo ay taasi jirto, hadana Milan waxay ciyaari doontaa iyadoo madaxeeda sare yahay, inagoo aanu ka war qabno inay heystaan waxyaabo ka dhigaya inay naga xoogan yihiin, balse kubada cagta wax walba ayaa ka dhici kara”.
“Massimiliano Allegri waa macalinkeyga, waa saaxiibkey, isbuuc kasta mudo dhan 30 daqiiqo ee taleefan ah ayaan ku wada hadalnaa, waxaan ka heystaa xusuuso cajiib ah, waxaana ka faa’ideysanayaa talooyinkiisa”.
Mourinho oo ka warbixiyay go’aankiisa kaga aadan ka qeyb galka Romelu Lukaku kulanka Manchester derby
Muxuu ka yiri Victor Lindelof kulanka xiisaha badan ee Manchester derby?